A nwụchiri onye ndọrọndọrọ ọchịchị Naịjirịa maka ịkatọ ntọrị ụmụakwụkwọ · Global Voices n’asusu Igbo
Salihu dere na tweet, 'Kwụsị ndị na -eyi ọha egwu
Translation posted 8 October 2021 3:20 GMT
Read this post in Italiano, Español, Nederlands, Français, English, English
Ezinaụlọ ndị mwakpo Boko Haram chụpụrụ na Adamawa na Borno steeti, Naịjirịa. Ndị Boko Haram kwuru na ha tọrọ ụmụaka narị atọ n'ụlọ akwụkwọ n'ọnwa Disemba afọ puku abụọ na iri abụọ. Foto nke EU Civil Protection na Enyemaka Ndị Mmadụ na Flickr, CC BY-NC-ND 2.0.
Ndị ọrụ nchekwa steeti (DSS) nwụchiri Salihu Tanko Yakasai, bụ onye na-enyere gọvanọ Steeti mpaghara ọdịda anyanwụ Naịjirịa aka na mgbasa ozi na nso nso a, maka ịkatọ ajọ ọnọdụ nchekwa obodo a.
Nna Yakasai gwara akwụkwọ akụkọ ịntanetị CableNG na ndị DSS jidere nwa ya nwoke ka ọ na -aga ebe a na -akpụ isi, na -agbakwụnye, “mana enweghị m ike ịkwụ ma ọ nọ ebe a na Kano ma ọ bụ ebe ọzọ. ‘
Yakasai ekwuola okwu megide ọchịchị onyeisiala Muhammadu Buhari – nke ọ bụ onye otu ya – maka ime obere ihe iji lebara enweghị nchekwa obodo anya na ihe kpatara ịtọrọ mmadụ. N'ime usoro tweet ọ mere n'ụbọchị ejidere ya, ọ tụrụ aro na nchịkwa ahụ emezughị ndị mmadụ chọrọ:
— Peacock (@dawisu)February 26, 2021
N'ụzọ doro anya, anyị, dị ka gọọmentị APC, na ọkwa niile, emechuola ndị Naịjirịa n'ọrụ nke mbụ a họpụtara anyị ịrụ nke bụ ịchekwa ndụ na ihe onwunwe. Ọ dịghị otu ụbọchị na -enweghị ụdị enweghị ntụkwasị obi n'ala a. Nke a bụ ihe ihere! Soro ndị na -eyi ọha egwu mee mkpebi siri ike ma ọ bụ gbaa arụkwaghịm. https://t.co/L5YCvik1Eb
Na nwute, ịtọrọ ụmụaka ụlọ akwụkwọ abụrụla ihe jọgburu onwe ya na ugwu Naịjirịa, Yakasai kwuru na n'agbanyeghị na ndị steeti ahụ nọ “na -akwa arịrị, na -akatọ, [na] mepụta hashtag”, enweghị “usoro ọ bụla dị mkpa iji gbochie nlọghachi, na mgbe ahụ anyị na -emegharị usoro ahụ ”.
Ọ gara n'ihu, tweetie:
Just last week it was #freekagaraboys, today we have a new hashtag #RescueJangebeGirls, who knows tomorrow what hashtag we will come up with? Perhaps one for ourselves when we get caught up in one of these daring attacks. This is sad & heartbreaking, I feel helpless & hopeless ?
Naanị izu gara aga ọ bụ #freekagaraboys, taa anyị nwere hashtag ọhụrụ #ZoputaUmuakaUmunwanyiJangebe, onye ma ihe hashtag anyị ga -abụ echi? Ikekwe otu maka onwe anyị mgbe anyị dabara n'otu n'ime mwakpo ndị a na -atụ ụjọ. Nke a dị mwute & na -agbawa obi, enwere m mmetụta enweghị enyemaka & enweghị olileanya ?
Ka ọ dị n'ụbọchị ịrị abụọ na asaa nke ọnwa Febụwarị, Abdullahi Ganduje, gọvanọ Kano chụrụ Yakasi n'ọrụ maka, okwu na -akpachapụghị anya na okwu ya” nke e chere na ọ na -emegide ọnọdụ “gọọmentị (APC) nke ọ na -eje ozi.”
Ka ọ dị ugbua, ndị na -ahụ maka netwọkụ na Naịjirịa na -akpọ oku ugbu a ka ewepụta Yakasi, na hashtag #HapuDawisu na -ewu ewu na Twitter, na onye nta akụkọ Omoyele Sowore na -ekwupụta na DSS nwere “obi ụtọ ịwakpo ndị Naịjirịa na -akatọ ọchịchị dara ada”:
#HapuDawisu Ndị DSS na -emebi iwu ejidela @dawisu maka ikwupụta echiche ya kpam kpam gbasara ọdịda gọọmentị @MBuhari. Ọchịchị ndị umengwụ DSS enweghị ike inyere ndị Naịjirịa aka na -eche enweghị nchekwa mana naanị dị njikere ma nwee obi ụtọ ịbịakwasị ndị Naịjirịa na -akatọ ọchịchị dara ada #BuhariGaAlariri
Onye ode akwụkwọ Demola Olarewaju gbakwụnyere na ụfọdụ “otu ndọrọndọrọ ọchịchị”, ma na -ezo aka na APC, “na -arụ ọrụ dị ka òtù nzuzo”:
Ụfọdụ ndị ndọrọndọrọ ọchịchị na -arụ ọrụ dị ka òtù nzuzo na enwe Onye isi ala dịka chi, ọ bụrụ na ị bụ onye otu ha, ​​ị nweghị ike mebie koodu wee kwuo okwu megide usoro pati – ma ị nọ n'ọkwa ponmo ma ọ bụ karịa.
Maka ọdịmma mmadụ, mmadụ na -esonyere n'ịgwa ndị jidere ya #HapuDawisu pic.twitter.com/i6Rl5Rci3Y – Demola Olarewaju
Otu onye ọrụ Twitter hụrụ njide Yakasi na -echetara ya ụzọ nke ndị uwe ojii nzuzo Nazi Germany si eme:
Ụdị njide @dawisu bụ nke jọgburu onwe ya. Ha agwaghị otu onye ezinaụlọ ya. Ha zupuru ya. Ha ejideghị ya ka Naịjirịa na -arụ ọrụ n'okpuru iwu & itinye aka na ọchịchị onye kwuo uche ya. Hitler gaara enwe mpako maka ndị DSS na nke a #HapụDawisu pic.twitter.com/viGRG7msxU -
Onye ọzọ matara maka mmebi nke Usoro ọchịchị a:
Ọ dị m ka ọ bụ ihe ọchị ugbu a na m dere na tweet “Alhamdulillah @dawisu achọtala” maka na anyị matara na ọ bụ steeti tọọrọ ya ọ bụghị ndị ntọ. Kedu mba na -adịghị arụ ọrụ! #HapuDawisu – Maazị M (@WordsworthGwary)
GỤKWUO: Abubakar Idris onye Naịjirịa ka n'efu efu nke mgbe ọtụ afọ eji tọrọ ya.
Tweet Yakasi bịara n*ụbọchị iri abụọ na isii nke ọnwa Febụwarị mgbe a tọrọ ụmụaka karịrị ụmụakwụkwọ narị atọ n'ụlọ akwụkwọ sekọndrị gọọmentị dị n'obodo Jangebe, nke dị na steeti ọdịda anyanwụ, Zamfara.
Ọ bụ mwakpo bidoro ịtọrọ ndi mmadụ-ụbọchị itoolu tupu mgbe ahụ-ihe dị ka mmadụ iri anọ na abụọ, gụnyere ụmụ nwoke iri abụọ na asaa n'ụlọ akwụkwọ, na kọleji sayensị gọọmentị dị na Kagara, nke dị na steeti Niger na mpaghara ugwu ọdịda anyanwụ nke mba ahụ. Ndị oji egbe ahu mere tọhapụ ndị ha dọtara n'agha ụbọchị iri ka e mesịrị, n’ ụbọchị ịrị abụọ na asaa nke ọnwa Febrụwarị, otu ndị jihadist ndị Alakụba Boko Haram kwuru na ọ bụ ya kpatara ntoro ihe dị ka ụmụ akwụkwọ narị atọ n'ụlọ akwụkwọ sekọndrị gọọmentị Kankara, na steeti ọdịda anyanwụ nke Katsina. A tọhapụrụ ụmụ nwoke ndị ahụ mgbe ụbọchị ole na ole gachara.
Naịjirịa: ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ a tọọrọ ka a kọrọ akụkọ ha pic.twitter.com/XaiqtUMJZK
Ịtọrọ ụmụaka ụmụakwụkwọ na Naịjirịa ahụla ihe egwu dị egwu, dịka onye nyocha nchekwa Bulama Bukart si kwuo, maka ezigbo ihe kpatara ya. Ọ bụghị naanị na ntọrọ ụmụaka na -akwalite aha ọha nke otu dị ka Boko Haram, nke na -ewepụ mgbasa ozi, ọ na -ebutekwa nrụgide ndọrọ ndọrọ ọchịchị na gọọmentị, na -eme ka ọ dịrị ndị ohi mfe ịrịọ mgbapụta.
Dị ka n'oge mbipụta, enwebeghi okwu ọ bụla gbasara mwepụta Yakasai.